Stefan Pabst sy ireo sary telo-tena misy azy | Famoronana an-tserasera
Stefan Pabst sy ireo sary telo-refy tena misy azy
Mpanakanto tsy mampino izay miasa amin'ny hyperrealism miaraka amin'ny marim-pototra mandanjalanja no nandalo teto amintsika, na izany aza mino aho fa ny tranga Stefan pabst ohatra tsy dia fahita firy. Avy amin'ny Rosiana ary mipetraka any Alemana ankehitriny, ny mpanakanto anay dia nanam-pahaizana manokana tamin'ny fanoharana notontosaina ary ny iray amin'ireo fanamby naroso dia ny famitahana ny mason'ny mpijery amin'ny alàlan'ny fanehoana izay ahitana antsipirihany feno sy antsipirihany manome antsika zavakanto sary. Ary ny fahatanorany Stefan dia manana talenta goavambe raha manahaka ny firakofana, ny famirapiratana, ny rafitra, ny fomba fijery ary ny aloka mba hanehoana ireo karazana zavatra telo-telo amin'ny fomba azo antoka tanteraka. Matetika isika eo alohan'ny iray amin'ireo fanoharana nataony dia tsy afaka ny hieritreritra isika fa manatrika sehatra roa refy isika fa tena misy tokoa isika, ny herin'ny maizina optika dia namandrika antsika ary nahavita nampikorontana antsika. Azo antoka fa zavatra mahavariana izy io.
Na dia mety tsy ho vita toa izany aza dia miatrika sombin-sary nentim-paharazana izay niasa hatramin'ny farany isika ary tamin'ny farany dia mahaiza mitambatra amin'ny tena zava-misy ary mifangaro miaraka aminy. Ireto misy ohatra vitsivitsy momba ny sanganasa kanto nataon'ny artista ary manasa anao aho hahita bebe kokoa ny sangan'asany Fantsona Youtube satria tsy mandany fako izy ireo. Any ianao dia afaka mankafy maherin'ny 70 zavakanto haingam-pandehan'ny sary, zavatra ary koa ny makiazy tsindraindray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Stefan Pabst sy ireo sary telo-refy tena misy azy
Ny Castle of Horrors: Sary nataon'i HH Holmes